Ulinganisa njani ukufunyanwa ngokuLinganisa iinzame zokugcinwa | Martech Zone
Ungayibala njani ibhalansi yokufunyanwa kunye neenzame zokugcinwa
Xa uzama ukufumana umthengi omtsha, ndiyakholelwa ngokwenyani owona mqobo mkhulu ekufuneka uwoyisile kukuthembela. Umthengi ufuna ukuziva ngathi uza kudibana okanye ugqithe kulindelo kwimveliso okanye kwinkonzo yakho. Kumaxesha anzima ezoqoqosho, oku kunokuba yinto enkulu ngakumbi njengoko ithemba lilindelwe ngakumbi kwimali abanqwenela ukuyisebenzisa. Ngenxa yoku, kusenokufuneka uhlengahlengise iinzame zakho zokuthengisa ukuze uxhomekeke kubathengi bakho abakhoyo.
Ukugcinwa akunakuba sisicwangciso sakho sonke, ngokusebenzisa. Ukugcinwa kwenzelwa inkampani enenzuzo kwaye oko kuthetha ukuba uphumelele ekunikezeleni ngexabiso kubathengi bakho. Nangona kunjalo, ukuba awufumani abathengi abatsha ngokungaguquguqukiyo, kukho ezantsi:
Abathengi bakho abaphambili banokukushiya usesichengeni xa behamba.
Iqela lakho lokuthengisa lisenokungasebenzi njengoko uzama ukuvala kwaye uphumeze ukuziqhelanisa.
Awunakho ukukhulisa kakhulu ishishini lakho.
Kule infographic evela kwiDatha yokuQala, zibonelela ngeenkcukacha-manani, amacebo, kunye neendlela ezinxulumene nazo zombini iindlela zokufumana nokugcina. Eyona nto ibaluleke kakhulu kubo bonke, banikezela ngesikhokelo sokulinganisa ukuthengisa kunye neenzame zakho zentengiso phakathi kwezi ndlela zimbini.
Ukufunyanwa ngokubhekisele kugcino lweenkcukacha manani
Kuqikelelwa ukuba phantse 40% yengeniso evela kwishishini le-ecommerce livela kuphinda abathengi.
Amashishini ane Ama-60 ukuya kuma-70% amathuba Yokuthengisa kwi ekhoyo umthengi xa kuthelekiswa I-20% ithuba ye entsha umthengi.
Ngokwezinye iingcali, ishishini elime kakuhle kufuneka ligxile I-60% yezixhobo zokuthengisa kugcino lwabathengi. Amashishini amatsha Kuya kufuneka bachithe ixesha elininzi ekufumaneni, ewe.
Ukulinganisa ukufunyanwa vs. Ukugcinwa
Imizamo yakho yokuthengisa inokumisela ukuba ubafumana okanye ubagcina kangakanani abathengi. Zintlanu izicwangciso eziphambili zokuhambisa zombini:
Gxila kuMgangatho -Tsala abathengi abatsha kwaye ukhuthaze abo sele bekhona ukuba bahlale kunye nenkonzo ekhethekileyo kunye neemveliso.
Zibandakanye naBathengi baNgoku - yenza ukuba isiseko sabathengi bakho esele sikhona sizive sixabisekile ngokubacela ukuba basasaze igama malunga nawe ngokujonga kwakhona kwi-Intanethi.
Yamkela ukuThengisa kwi-Intanethi -Sebenzisa imidiya yoluntu ukunxibelelana nabathengi abatsha kunye nokuthengisa okujolise kwi-imeyile ukuphinda uqhagamshele kunye esele ikho.
Vavanya iSiseko saBathengi bakho Ngena kwidatha yakho ukuze ufumanise ukuba yeyiphi kubathengi bakho bangoku ekubaluleke kakhulu ukubambelela kuyo kwaye ingeyiyo.
Fumana ubuqu bakho -Thumela amanqaku abhaliweyo ngesandla kumthengi okhoyo kwintengiso esebenzayo enceda ekwakheni igama elinamandla lomlomo.
Malunga neDatha yokuQala
Ekuqaleni Iinkcukacha yinkokeli yehlabathi kwiintlawulo kunye netekhnoloji yezemali, ekhonza amawaka amaziko emali kunye nezigidi zabarhwebi kunye namashishini kumazwe angaphezu kwekhulu.